Masaajida Magaalada Muqdishoku iyo Somaliya oo Salaadii Jimcaha looga hadlay cudurka Coronavirus. – Kismaayo24 News Agency
Masaajida ku yaala deegaanada kala duwan ee gayiga Soomaaliyeed ayaa maanta salaada jimce lagaga hadlay cudurka Coronavirus oo dhibaato badan caalamka ku haya, waxaana shacabka muslimiinta ah la faray in ay taxadaraan oo alle talo saartaan.
Magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya ayaa culimadu weli ka wacyi gelinaysaa dadka cudurka Coronavirus oo ka dilaacay dalka Shiinaha saameeyey dalal badan oo Caalamka ah, waxaana magaalada Muqdisho ee caasimada dalka laga helay kiiskii ugu horeeyey ee la xidhiidha cudurkaasi qof qaba.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa la tacaalaya ka hor tagista cudurkan halista ah oo saamayntiisa laga dareemay dalal badan oo Afrika ah.
Garoomada dalka ayaa inta badan, waxaana amar kasoo baxay dowladda lagu hakiyey sii shaqaynta garoomada diyaaradaha Soomaaliya halka la fasaxay goobaha waxbarashada muddo afar todobaad ah.
Shiinaha, Iran, Maraykanka, Talyaaniga iyo dad badan ayaa caabuqa Coronavirus uu haleelay, waxaana u dhigtay dad badan kuwaas oo u badan dad da’ ah.
Xaalada oo kasii daraysa marba marka kasii dambaysa ayaa sababtay in dalal badan oo Islaam ah ay albaabada u laabaan goobaha la isku yimaado iyo masaajida si looga hortago faafida cudurkani oo halis ku noqday caalamka oo dhan.
Daawo: Heestii Baargeel iyo fanaankii Nasteex Saciid